Hulled Hemp Seed | Hemp Seed | ထည်မျိုးစေ့ - HelpMEHemp
ပင်မစာမျက်နှာ Hemp Seed Superfoods Hemp Hemp မျိုးစေ့များ
Hemp Hemp မျိုးစေ့များ
HelpMEHemp's® Hulled Hemp Seeds အာဟာရဓာတ်များပါ ၀ င်သည်။ ၃ အခွံမာသောအစေ့များဇွန်းတစ်ဇွန်းကသင့်အားပရိုတင်း ၁၀ ဂရမ်ပေးပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ရင်းဖြစ်သည်။
လျှော်နှလုံးဟုလည်းခေါ်သည့်လျှော်မျိုးစေ့များသည်သူတို့၏အပြင်ဘက်အခွံကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပြီး၎င်းသည် ပို၍ အာဟာရဖြစ်စေသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ HelpMEHemp's® Hemp Hemp မျိုးစေ့များ အစေ့များတွင်အဆီဓာတ်၊ ကိုလက်စထရော၊ ၎င်းတို့သည်ဖိုင်ဘာနှင့် Omega-3 fatty acids အလွန်များပြားသော်လည်းအရေးအကြီးဆုံးမှာ omega-6 fatty acids (GLA) နှင့်အခြားအစားအစာများစွာတွင်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲသောအရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ လေ့လာချက်များအရကျန်းမာသောကိုယ်ခံအားစနစ်သည်အိုမီဂါ -6 နှင့်အိုမီဂါ -၃ ဖက်တီးအက်စစ်တို့၏ချိန်ခွင်လျှာအပေါ်များစွာမူတည်နေသည်။ Hemp seed သည်အိုမီဂါ -3 ၏အကောင်းဆုံးဓာတ်စာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီးအလွန်စိတ် ၀ င်စားသော polyunsaturated နှင့်မရှိမဖြစ် fatty acids များအားလုံးသည် ၄ ​​င်းတို့အားလုံးသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးတွင်လည်ပတ်မှုကိုပြောင်းလဲရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။
၏ Courtesy HelpMEHemp, ကျွန်ုပ်တို့၏ထုပ်ပိုးမှုတွင်မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုပျော်မွေ့စေမည့် Hemp Milk အတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အရသာရှိသောစာရွက်ပါရှိသည်။ အောက်ပါ (သို့) YouTube @HelpMeHemp တွင်ပြုလုပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏မိသားစုကိုကြည့်ပါ။
သင့်ရဲ့အရသာဘူးသီးများသည်ကြွယ်ဝသောအာဟာရအရသာနှင့်အတူရှင်သန်လာလိမ့်မည် HelpMEHemp's® Hemp Hemp မျိုးစေ့များ။ သင့်ရဲ့ဖျော်ရည်များ၊ ဒိန်ချဉ်များ၊ သီးနှံများ၊ အသုပ်များနှင့်အခြားအရာများအားဤ gluten-free၊ GMO မဟုတ်သည့် kosher လျှော်သောအစေ့များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ကျန်းမာပြီးအပြည့်အ ၀ ခံစားရသည်။
အရွယ် 8 အောင် 16 အောင် 8.8 အောင်စဖန်
14 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ. ထင္ျမင္ခ်က္ေရးထားခဲ့ပါ။
လျှော်အစေ့ကိုချစ်။ အရာအားလုံးအပေါ်ဂရိတ်။ အရမ်းလတ်ဆတ်တယ်
ဤအရာများကိုချစ်မြတ်နိုးပါ !! သူတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ဒိန်ချဉ်ထဲသို့ထည့်ပြီးကြော်ပြီးသည့်အခါဖြန်းဖြန်းပါ (တစ်နေ့သာရနိုင်သည်)! အရသာနှင့်ပရိုတင်းဓာတ်များစွာရရှိသည်။ ကျိန်းသေပိုပြီးဝယ်ယူလိမ့်မည်။
ငါထည်အစေ့ကိုချစ်! ငါသူတို့ကိုမနက်စာစားဖို့ထပ်ထည့်လိုက်တယ်၊ သူတို့ကငါ့ကို ၇၀၀ ကနေ ၁၄၀၀ လောက်အထိပြည့်နေအောင်လုပ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်းစားရင်သူတို့ဟာအစားအစာတွေကိုမလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့၊ မြေသားအရသာရှိတယ်၊ ရောစပ်လိုက်ရင်တခြားအရသာတွေကိုမကျော်လွှားနိုင်ဘူး။ Yum yum!
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ, ချစ်ခြင်း, ဤသေးငယ်တဲ့အစေ့ကိုချစ်။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်၏သစ်သီးသုပ်များ၊ ချောချောမွေ့မွေ့များ၊ ပုံမှန်အသုပ်များ၊ ပန်းသီးဆော့စ်၊ ဒိန်ချဉ်နှင့်အခြားပရိုတင်းများကိုစားရန်ကျွန်ုပ်ထည့်နိုင်သည်။ ကျွန်မမှာကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတဲ့ပြhadနာတွေရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကျော်လောက်အတူတူပဲကျန်ခဲ့တယ်။ အစေ့များထည့်ပြီးသောအခါကျွန်ုပ်၏သကြားလိုအင်ဆန္ဒများလျော့နည်းလာပြီးစကေးစတင်လှုပ်ရှားလာသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်နှေးကွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အစေ့များကိုထည့်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် ၆ ပေါင်ကျော်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၂ လကျော်က
Og ဤကလေးငယ်များသည်အလွန်အရသာရှိလှသည်။ အခွံအရူးမပါဘဲနေကြာစေ့ကဲ့သို့! ငါသူတို့ကိုဒိန်ချဉ်၊ နေ့ချင်းညချင်းအဆီ၊ ချော၊ ဒါမှမဟုတ်လက်တဆုပ်စာအနည်းငယ်စားပါ။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်! သူတို့ဟာအရသာရှိတာမို့အစားအစာဒါမှမဟုတ်သရေစာတွေအတွက်လေးနက်တဲ့အဆာတွေထည့်ပေးတယ်။ ဒါ့အပြင်အလွန်အမင်းအကြံပြုလိမ့်မယ်!
ငါဒိန်ချဉ်ကိုသုံးတယ်၊ ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်သောအခါလျှော်နို့ကိုလုပ်သည်။ အလေးချိန်စောင့်ကြည့်သည်၊ ကြက်ဥအသုပ်တွင်ထည့်သည်။
ကျွန်ုပ်၏နံနက်ဒိန်ချဉ်တွင်နေ့စဉ်သစ်သီးတစ်လုံးမှတစ်နှစ်မှ ၂ ပေါင်အထိပေါင်းထည့်သည်။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်နေ့နည်းနည်းကြာပြီးနောက်နေ့လည်စာစားတော့သည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ကျိန်းသေသည်သင်တို့ကိုဖြည့်ခြင်းနှင့်သကြားမတရားသောလျော့နည်းစေသည်။ ဒီအစေ့တွေကိုကြိုက်တယ် ဒီကမ်းလှမ်းချက်ကိုပရိုတိန်းကိုကြိုက်ပါ။
sooooooooooooo ကောင်းသောငါ dixie ခွက်ထဲကသူတို့ကိုဖြောင့်ကိုစား :) ငါပဲလျှော်နို့၏ပထမ ဦး ဆုံးအသုတ်လုပ် !!! Omgosh sooo ကောင်းတယ်။ ငါကြိုးစားရန်ဤရှည်လျားငါ့ကိုယူယုံကြည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
Hemp Hulled Seeds ❤️ဤသည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးစွဲလမ်းမှုဖြစ်သည် - Hemp Hulled Seeds .. .... သူတို့သည်အလွန်သန့်ရှင်းပြီးအရသာရှိပါသည် !!!! ငါ့ကိုယ်လိုတာကိုပေးတယ်။ Fibromayglia ဆိုတာကနေ့စဉ်အာဟာရဓာတ်ကိုရောင်ရမ်းတာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အတွက်အဓိကစားသုံးတာပါ။ ဒါပေမယ့်တချိန်တည်းမှာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတာကိုကူညီရာမှာလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ အဲဒီမှာကြီးမားတဲ့ပေါင်း !! ကျွန်ုပ်သည်ဤကျန်းမာသောထုတ်ကုန်နှင့်သူတို့၏အခြားထုတ်ကုန်များကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများရှိသည်။ .. Keri နဲ့ Bob တို့ရဲ့လှပတဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ ! ❤️
ခွေးများအတွက်စူပါကုတ်အင်္ကျီ! ခုနစ်လအရွယ်ကြီးသောဒိန်းတွင်ပြင်းထန်သောအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းခံစားခဲ့ရပြီးသူသည်စိတ်ဒဏ်ရာများကိုမရပ်တန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့သောဆေးမှုန်ရေမွှားဆေးသည်သူ၏အစားအစာကိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်သူ၏ခွေးအစာပေါ်တွင်ခုနစ်ရက်ပတ်လုံးဖြန်းလိုက်သည်။ သေးငယ်တဲ့ခွေးကလေးယခုဘာမှအောင်မြင်နိုင်!
ဒါတွေကိုချစ် ဒီသေးငယ်တဲ့အရာတွေဟာကြောက်စရာကောင်းတယ် တကယ်တော့ငါက croutons ကိုသုံးပြီးရပ်တန့်နိုင်အောင်အခြားအဘယ်အရာကိုမျှော်လင့်ရမလဲထို့နောက်ငါ့အသုပ်ထည့်သွင်းဖို့ crunchy တစ်ခုခုမသိဘဲသူတို့ကိုအသုံးပြု။ သို့သွားလေ၏။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ယခုငါအရာအားလုံးကိုထည့်သွင်း! နံနက်ယံ၌ဒိန်ချဉ်၊ နေ့လည်စာစားချိန်၊ အသုပ်များ၊ ငါ့မှာသကြားကိုစွဲစွဲလမ်းလမ်းစွဲလမ်းနေတယ်၊ ​​ငါဟာပုံမှန်လိုမပြင်းထန်ဘူး။ ငါသူတို့ကိုထည့်ပြီးနောက်အပြီးအပြည့်အဝခံစားမှုကြာကြာနေဖို့။ ထိုအခါငါသူတို့ကိုငါ့သား snacks သို့ခိုးကြောင်သူကပင်သတိထားမိ! အံ့သြဖွယ်ထုတ်ကုန် !!
သဘာဝကျကျအကြိုးပွု! ဒီသစ်သီးမျိုးစေ့သည်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Help Me Hemp ဆီမှလျှော်မျိုးစေ့များကိုချစ်မြတ်နိုးပါ။
အရသာကောင်းတဲ့ nutty အရသာရှိတယ်။ ဂရိဒိန်ချဉ်ပေါ်မှာချစ်ကြတယ်။ Fantastic မျိုးစေ့များ။
စူပါအစေ့များဤအစေ့များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီးသင်အားလုံးနီးပါးတွင်ထည့်နိုင်သည်။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်၏ Waffle's, Soup သို့မဟုတ်ငါ၏အသုပ်အပေါ်တွင်ထိပ်ဆုံးတွင်ထည့်သည်။
အချစ်ရဲ့အချစ် ဤထုတ်ကုန်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ရပြီ။ ငါ့အသားအရေဟာကျန်းမာသန်စွမ်းနေပြီးအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ရာသီဥတုမှာနေထိုင်တယ်၊ ချောချောမွေ့မွေ့, လျှော်နို့ငါတို့အစားအစာသို့လျှော်ပရိုတိန်းထည့်သွင်းနည်းလမ်းအနည်းငယ်ပဲ။ ကြေးနန်းရေနံနှင့်ပရိုတင်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုကူညီပေးပြီးကျွန်ုပ်၏ ဦး ရေပြား psoriasis အပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ထောပတ်ကိုချစ်ခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခံစားမှုဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ကုစားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိအကြံပြုလိမ့်မယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ…အချစ်…အချစ်…သဘာဝကုထုံး
ပထမဆုံးအကြိမ်! ဒါကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးလျှော်သစ်စေ့ကြိုးစားနေတာပါ။ ငါသူတို့ကိုချစ်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဂရိဒိန်ချဉ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အများအားဖြင့်၎င်းတို့ကို Raspberry ဖြင့်ရောစပ်သည်။ သူတို့ကတစ် ဦး nutty အရသာနှင့် texture ရှိသည်။ ငါသည်လည်းလျှော်နို့နှင့်ငါ့ကော်ဖီထည့်ပါ။ သိပ်ကောင်းတယ်! အခြားထုတ်ကုန်များအားလုံးကိုကြိုးစားရန်မစောင့်နိုင်ပါ